सरकार र डा. केसीका प्रतिनिधिबीच शिक्षा मन्त्रालयमा भएकाे वार्ता असफल « LiveMandu
सरकार र डा. केसीका प्रतिनिधिबीच शिक्षा मन्त्रालयमा भएकाे वार्ता असफल
२३ आश्विन २०७७, शुक्रबार २२:४३
काठमाडौं । सरकार र डा. केसीका प्रतिनिधिबीच शिक्षा मन्त्रालयमा वार्ता असफल भएको छ ।
बिहीबार बिना निष्कर्ष टुंगिएको वार्ता शुक्रबार पुनः शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा राति ९ बजे वार्ता सुरु भएको थियो । अभियान्ता प्रितम सुवेदीले आज भएको बार्ता पनि बिना निष्कर्ष टुंगिएको जनाएका हुन् ।
डा. केसीका वार्ता समितिमा डा. जीवन क्षेत्रीको संयोजकत्वमा डा. अञ्जनीकुमार झा, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्की सहभागी भएका थिए भने सरकारतर्फ शिक्षा सचिव गोपिनाथ मैनालीको संयोजकत्वमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव गुणराज लोहनी र चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक डा। दिलीप शर्मा सरकारी वार्तामा टोलीमा सहभागी थिए ।